Noocyada Midabka, Pantone, iyo CMYK Midabada Photoshop | Abuurista khadka tooska ah
Masiirka mashariicdeena waa su'aal ay tahay inaan isweydiino marka ugu horeysa ee aan ka shaqeyno halabuur. Maaha wax isku mid ah haddii aan ka shaqeyneyno mashruuc yeelan doona mid muuqaal ah ama mid daabacan meeshuu u socdo ama haddii aan ka shaqeyneyno mashruuc ku faafin doona deegaanno dhijitaal ah iyo aaladaha elektaroonigga ah halka ay u socoto. Farqi weyn ayaa u dhexeeya. Mid ka mid ah wajiyada ay tahay inaynu ku go'aamino wajigan hawsheenna waa qaabka midabka.
Waxaan adeegsan karnaa qaabab midabbo kala geddisan mid walbana waxaa loogu talagalay inuu ka shaqeeyo mashaariicda nooc gaar ah oo ujeeddo gaar ah leh.
Fiidiyowga soo socda waxaan dib u eegeynaa qaababka midabka ugu muhiimsan waxaanan eegeynaa sida aan ku heli karno maktabadaha midabbada kala duwan (oo ay ka mid yihiin kala soocidda Pantone iyo kuwa kale oo badan). Waxaan sidoo kale baran doonaa sida aan ugu beddeli karno hal qaab midab midab midab mid kale oo ka mid ah barnaamijka Adobe Photoshop iyo sida aan ugu beddeli karno midabbada la farsameeyay ee lagu sameeyay CMYK (taas oo ah, Cyan, Magenta, Jaalaha iyo Black inks) illaa Pantone hadhka. Runtu waxay tahay inay yihiin tillaabooyin aad u fudud laakiin isla markaa go'aamiya oo aad muhiim ugu ah natiijooyinka ugu dambeeya. Waxay ku xirnaan doontaa nooca habka aan dooranno ee aan ku heli doonno natiijo iyo fursado kale. Ma ka warqabtay hababka midabka iyo maktabadda Pantone ee ku taal Adobe Photoshop?
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Photoshop » Casharka Fiidiyowga: Noocyada Midabka, Pantone iyo Midabada CMYK ee Photoshop